စတီဗင် Tyler ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်ရပ်အတွက်ရှာရုန်ကျောက်စာနှင့်အခြားနာမည်ကြီးတွေ
မနေ့ကဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေဟာအလွန်အလုပ်များသောနေ့ရက်ဖြစ်ထွက်လှည့်။ New York မှာအချို့လွှဲပြောင်း statuettes "ဂရမ်မီ" အဖြစ်စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းနှင့်အခြားသူများကိုသူ Los Angeles မှာတညျဆောကျခဲ့သောပရဟိတညနပေိုငျးစတီဗင် Tyler ၏ဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာနာမည်ကြီးတွေအများကြီးမင်းသမီး Sharon Stone, Olivia ရိုင်းများနှင့်အခြားသူများသူတို့တွင်ရှိခဲ့သည်။
2015 ခုနှစ်, တစ်နှစ်နာမည်ကျော်ဂီတပညာရှင်စတီဗင် Tyler သူ Janie ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကိုခေါ်သည့်လူမှုရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုခံစားခဲ့ရကြသူအမြိုးသမီးမြားကိုကူညီနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေ၏ဖန်ဆင်းခြင်းစိတ်ကူး, သူသည်ဖခင်အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ကျော်မိန်းကလေးတစ်ဦး Gina ၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောဇာတ်လမ်းကိုလေ့လာသင်ယူပြီးနောက်သူ, နောက်ဆုံးသောရာစုအ 80s ပြန်ရောက်လာတယ်။ ထိုအခါအဖြစ်ဆိုး Janie ရဲ့ Got တစ်ဦးဂွန်လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းအတွက်ခံပြီးနှင့်တကယ်ပေးနိုင်မှသာ 35 နှစ်အကြာတွင်စတီဖင်ကူညီပေးနေပါတယ်။
မိမိအချစ်ရာသခင်သည်အမေီ Preston နှင့်အတူစတီဗင် Tyler
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇန်နဝါရီလနှောင်းပိုင်းအတွင်း Tyler သူမ၏အနီးကပ်မိတ်ဆွေများနှင့်တစ်ဦးလေလံစီစဉ်နိုင်ရန်အတွက်အကြမ်းဖက်မှုခေါင်းစဉ်ဂရုစိုက်သောသူအပေါင်းတို့တို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်, ပိုက်ဆံ Janie ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Foundation မှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်နာမည်ကြီးဂီတပညာရှင်တစ်ဦးအလည်အပတ် 59 နှစ်အရွယ် Sharon Stone, သူ့အံ့သြဖွယ်လမ်းနှင့်အတူ Charm လူတိုင်းရောက်လာတယ်။ ဒူးအထက်အလျားလိုက်အပေါက်နှင့်အတူနက်ရှိုင်းသော neckline, တပ်ဆင်ဘော်လီနှင့်ကျယ်ပြန့်ခြေထောက်ဖြတ်: အဆိုပါမင်းသမီးအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာဖြတ်ခဲ့တဲ့အနက်ရောင် velor jumpsuit တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အထံတော်သို့ကျောက်ခေတ်ပေါ့ပါးအနက်ရောင်မိုးကာအင်္ကျီဝတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, လက်အပြာရောင်မျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူကွင်းများနှင့်မျက်မှန်၏ပုံစံအတွက်ရွှေမြန်မာနယ်စပ်နှင့်တူညီသောအရောင် clutch, ဒါပေမယ့်ဖြည့်စွက်ကြီးမားသောရွှေနားကပ်တစ်လမ်းယူပါ။
ထိုအဖြစ်အပျက်၏ဓါတ်ပုံများကိုဧည့်သည်များ၏မြောက်မြားစွာအရေအတွက်ကိုကနေအင်တာနက်ပေါ်ရှိထင်ရှားလျက်, ကပရိသတ်တွေရှာရုန်ကျောက်ခေတ်သူ, စတီဖင် Tyler နှင့်သူ၏ရည်းစားမေီ Preston, Kelsey, သမီး Tyler, Ashlee Simpson နှင့်အီဗန် Ross ကသုန် Sudeikis နှင့် Olivia ရိုင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက် ။ သူမသည်အပေါင်းတို့သည်သူ၏ချစ်စရာကောင်းအပြုံးနှင့်သူမကြည့်ရှုလမ်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါကစကားများအင်တာနက်ပေါ်ရှိကိုဖတ်ရှုနိုင်ဘာလဲ: "ငါအမြဲတမ်းကျောက်ခေတ်ကြိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ကျပါကအရသာဖြစ်ပါသည်။ ဤအပျော်ရွှင်အမျိုးသမီးတွေမှာကြည့်ဖို့ nice, ထို့နောက်သင်သိသောကြောင့်, အသက်အရွယ်ကြောင့် - သူကပဲဂဏန်းရဲ့ "," ငါရှာရုန်အားဖြင့်စှဲမပေါ့။ သူမရဲ့အပြုံးသည်သူ၏မျက်နှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ချက်ချင်းအဆိုပါအဟောင်းတွေရှာရုန် "" သူမကဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်တွေ့မြင်ဒါကြောင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာသည်။ သူ့ကိုက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ကျက်သရေဝယ်ယူနေသောကြောင့်သူမသည်တကယ်စသည်တို့ကို ", သူမ၏အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်
စတီဗင် Tyler ရဲ့သမီးချယ်ဆီး
Ashlee Simpson နှင့်အီဗန်ရော့စ်
ဂျေဆန် Sudeikis နှင့် Olivia Wild
Liv အဘိဓါန် Tyler သူနှောင့်ယှက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်းပြောပြတယ်
အလွန်သေးငယ်တဲ့ရင်သားရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကြောင်းပေါင်းမဟုတ်ကြသည်! သူကို 17 ကြယ်များ
ကြောက်မက်ဘွယ်သောရောဂါကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်သူကို 16 ကြယ်
Photocall ကျော်နှင့်လူထုရှာရုန်ပြုမူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ထိုဧည့်သည်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စကိုဖြေရှင်း, ခန်းမသို့ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။ ပြီးနောက် ဒီမှာမင်းသမီး၏စကားဆိုသည်:
"ငါ့ကိုအဘို့, Pennsylvania ပြည်နယ်ကနေဟောလိဝုဒ်မှလာသောယောက်ျားသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စကအရမ်းလေးနက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်ရှိနေစဉ်ကဘုံအလေ့အကျင့်ခဲ့, ယခုငါမသွားဘူးငါ့ကိုပေးသောခဲ့သောယောက်ျားအကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုသည်။ တစျခြိနျကျနော်သူတို့ပြောဘာလုပ်, ဒါမှမဟုတ်ထထုပ်ပိုးများနှင့်အိမ်ပြန်သွားရမယ့်ရွေးချယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတကယ်နာမည်ကြီးမင်းသမီး, တောက်ပသောဓာတ်ပုံများကိုအတွက်အခန်းကဏ္ဍကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါဖန်ဆင်းမည်တဖြစ်လာချင်တယ်။ ယခုဘဝ၌အရာရာထိုသို့ထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရင်တောင်ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ ငါမအမြဲသားကောင်တို့သည်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူပြီးနောက်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သောကြောင့်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုခေါင်းစဉ်အလွန်လေးနက်ကြောင်းအလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ စတီဗင် Tyler ဒီရန်ပုံငွေဖွဲ့စည်းသောညာဘက်အရာ, ပြုလေ၏။ ငါကသူတို့ဘဝအတွက်ရှုပ်ထွေးတီးဝိုင်းကိုကျော်လွှားရန်အများအပြားမိန်းကလေးများနှင့်မိန်းမတို့ကိုမလတံ့သောကောက်ရိုးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ချင်ပါတယ်။ "
ရှာရုန်ကျောက်စာဟာ Gala ညဦးယံ၌ပြောတတ်
အီဗန် Ross က Ashlee Simpson, မေီ Preston နှင့်စတီဗင် Tyler
တွမ် Hardy Madame Tussauds မှာဖယောင်းထင်ရှားခဲ့ပါသည်
ဂျေဆန် Priestley Harvey Weinstein လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ: "သွေးဆုံး - ဒီအဆုံးမဟုတျပါဘူး!"
Kim Kardashian ကမင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီးကျော်လွှားခဲ့ပါသည်
Robert De Niro ရုရှားနိုင်ငံသားရယူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစား
Sinead O'Connor အရေးတကြီးဆေးရုံတင်နှင့်ဆေးရုံများတွင်ဆေးကုသမှုခံယူ
Kim Kardashian ၏ထောက်ခံမှုအတွက်စတားအပိုင်း
Kylie Minogue သူလက်ထပ်ဘယ်တော့မှမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်
ဂျနီဖာဂါနာနဲ့ရောနှင့်ဘန်အက်ဖလက်ကလေးများခရစ္စမတ် Spruce ရှေးခယျြခဲ့
ဆွီဒင်ရဲ့မင်းသားတဲ့ Carl ဖိလိပ္ပုနှင့်မင်းသမီးဆိုဖီယာမိဘများဖြစ်လာခဲ့သည်
ထိုအနာတာလီ Portman တစ်ခုခုကိုဘွားမြင်လေ၏ ...2weeks ago!
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရှုပ်တော်ပုံဗီဒီယိုရှိသွားပြီ Hogan 140 သန်းအားဖြင့်ချမ်းသာဖြစ်လာခဲ့သည်
Balkhash Savage အတွက်ကြွင်းသောအရာ
-လောက်လွှဲ May - အဘယ်အရာကိုနှစ်အရွယ်တွင်?
ညအချိန်တွင်လက်၌ထုံ - အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
Hypoglycemic မေ့မြော - လက္ခဏာများ
Varna - ဆွဲဆောင်မှုများ
Scheffler - မျိုးပွား
Los Angeles မှာ 17 အံ့သြဖွယ်သောနေရာများ
ဝက်သား ase ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?